झोले डाक्टरले लिए ५ जनाको ज्यान – खबर खुराक
Home > मुख्य समाचार > झोले डाक्टरले लिए ५ जनाको ज्यान
२१ मंसिर २०७६, शनिबार १०:४४
बाँके,२१ मंसिर । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियामा अवैध मेडिकल सञ्चालन गरेका ‘झोले डाक्टर’ राजेशसिंह ठाकुरले उपचार क्रममा २ महिनाको अवधिमा ५ जनाको ज्यान लिएको रहस्य खुलेको छ । सोमबार नरैनापुर–५ का गयाराज धोबी र राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ का मानिकराम धोबीको उपचार क्रममा मृत्यु भएपछि मंगलबार स्थलगत समाचार संकलन गर्न गाउँ पुगेका सञ्चारकर्मीलाई स्थानीयले असोज दोस्रो सातायता ५ जनाको ज्यान गएको बताएका हुन्।
मटेहिया चोकमा एकाबिहानै भेला भएका मृतक गयाराजका माइलो बुबाको छोरा शिवराज धोबी, देवराज यादवलगायत ठूलो संख्यामा रहेका स्थानीयले असोज दोस्रो साता करिब ५० वर्षका बेचनलाल मौर्य र उनका ३५ वर्षका भतिज शिवकुमार मौर्यको ठाकुरले उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको बताए। कात्तिकमा नरैनापुर–५ मोतीपुरका ६० वर्षका चित्रबहादुर रोकायले ठाकुरको उपचारकै क्रममा ज्यान गुमाए। तीन वर्षअघि एक सुत्केरीको उपचार गर्ने क्रममा ज्यान गएको थियो। उपचार गर्न आएका धेरै बच्चाको मृत्युको कुनै लेखाजोखा नभएको उनीहरूको जिकिर छ।
ठाकुरले सुरुमा आफूले उपचार गर्ने र सिकिस्त भएपछि बहराइच वा लखनउमा रिफर गर्थे। बिरामी रिफर गरेबापत पनि उनले अस्पताल र डाक्टरको क्लिनिकबाट कमिसन लिने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। भारतको बहराइचमा चिकित्सकको सहयोगी भएर काम गरेका ठाकुर १५ वर्षदेखि मटेहियामा अवैध औषधि पसल चलाएर बसेका थिए। उनी हाईस्कुल पनि पास नभएको बुझिएको छ । औषधि लेखेर दिने पर्चामा भने उनले आफूलाई डाक्टर लेख्थे। सोमबार दुई जनाको मृत्यु भएपछि उनी मेडिकलमा ताला लगाएर फरार छन् ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकास्थित नैना अस्पताल सामान्य मेडिकलजस्तो समेत छैन। तर, यहाँ अप्रेसन गरिरहेकै अवस्थामा ६ जना बिरामी भेटिए। तीन वर्षअघि अदक्षले अप्रेसन गरेपछि बिरामी थला परे। जनस्वास्थ्य कार्यालयले छापा मार्‍यो। ६ जना बिरामी बेडमा सुतिरहेका थिए। अप्रेसन थिएटर भनिएको स्थानमा न उपकरण थिए न त सरसफाइ नै ! अस्पतालमा आफूलाई डाक्टर बताउँदै अप्रेसन गर्ने डा. विद्या शुक्ला र डा. सुरज गिरी फरार भए । नैन अस्पताल त बन्द भयो। तर, रुपन्देहीका मर्चवार, लुम्बिनी क्षेत्रमा यस्तै अस्पताल/मेडिकलको बिगबिगी छ। सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा औषधि नपाइने, चिकित्सक नबस्ने भएपछि रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिक असुरक्षित सेवा लिइरहेका छन्।
बंगाली डाक्टरको परिचय
तराईका जिल्लामा सक्रिय झोले डाक्टरलाई स्थानीय बंगाली डाक्टर भनेर चिन्छन् । भारतको वेस्टबंगाललगायत स्थानबाट आएकाहरू मेडिकल खोलेरै आफूलाई डाक्टर बताउँदै उपचार थाल्छन् । उनीहरू सँग स्वास्थ्यकर्मीको नक्कली कागजात हुन्छ । प्रशासनको कहिल्यै अनुगमन नहुने भएकाले यी बंगाली नागरिक असली डाक्टर कहलिने मौका पाएका छन् ।
कपिलवस्तुको सदरमुकाममै यस्ता डाक्टरका क्लिनिक छन्। कपिलवस्तु नगरको तौलिहवा बजार, मोहरिया चौराहा, यशोधरा गाउँपालिकाको विचलीभंडेहर, तितिर्खा, अम्लोनहा चौराहा, मर्यादपुरमा बंगालीले निर्वाध क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन्। मायादेवी गाउँपालिका र महाराजगन्ज, कृष्णनगर नगरपालिकामा पनि यिनीहरूकै भरमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूले नियमविपरीत पायल्स, दाँतलगायत माइनर अप्रेसन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मेडिकलमा म्याद गु्रजिएका औषधि पनि किनबेच हुने गरेको पाइएको छ ।
बंगाली डाक्टरले सञ्चालन गरेको अवैध क्लिनिकका कारण आफूहरूको पेसा प्रभावित हुने गरेको कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मोहरिया चौकमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका सुरेन्द्र गुप्ताले बताए। ‘हामीले सरकारी नियमानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दर्ता गराएका छौं। कर तिर्छौं,’ स्वास्थ्यकर्मी गुप्ताले भने, ‘नाम, ठेगानासमेत सही नभएका नक्कली डाक्टरका कारण हामी समस्यामा छौं ।
बंगाली डाक्टर आफ्ना सेवाग्राहीलाई थप जटिलता भए मात्रै रिफर गर्छन्। कतिपय मेडिकल नै बन्द गरेर फरार भएको स्थानीय बताउँछन्। कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रका क्लिनिकको लगत संकलन भइरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मधुकर घिमिरेले बताए। लगत संकलनपश्चात् अनुगमन गरेर गैरकानुनीलाई बन्द गरिने उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०७६, शनिबार १०:४४
Posted in मुख्य समाचार, समाचार, समाजTagged ‘झोले डाक्टर
Previous: माछा माछा’लाई मिश्रित प्रतिक्रिया
Next: सुचना मार्ग बनाउने जिम्मा टेलिकमले पायो